Mayelana NATHI - Ningbo Milucky Craftwork Co, Ltd.
IMilucky kwakuyinkampani entsha eyasungulwa edolobheni laseNgobo, okuyidolobha eliyichweba, elisempumalanga yeSifundazwe SaseZhejiang eChina. IMilucky yadalwa futhi yalawulwa ngaphansi kwe-Dongming Craftwork Co, Ltd. Ukuhlomula efektri ekhona, okokusebenza, okokugcina izimpahla, kanye nobuchwepheshe be-Dongming Craftwork Co, Ltd, iMilucky ibikhethekile ekwenziweni kwemikhiqizo ye-foam ye-PU kufaka nethoyi lekhekhe le-squishy, ​​squishy ithoyizi lesinkwa, amathoyizi wesilwane squishy, ​​amathoyizi wezithelo squishy, ​​amathoyizi we-squishy foam neminye imikhiqizo ehlobene ne-PU. IMilucky yayiqinile ekusebenziseni izinto ezingavuthiwe, zonke izinto zokwakha azinobuthi futhi zi-eco-friendly, imikhiqizo yethu ifana nezindinganiso zokuphepha zaseYurophu, eMelika naseJapan.
Milucky uphishekela ikhwalithi ephezulu yomkhiqizo kanye nensizakalo engcono yamakhasimende. Sizofeza isidingo sekhasimende lethu ngemikhiqizo ephezulu kakhulu ngamanani wokuncintisana nezinsizakalo ezihamba phambili. Samukela ngemfudumalo abathengi ukuthi bavakashele ifektri yethu futhi basungule ubudlelwane bebhizinisi elide nathi. Ngiyabonga.
Mayelana neZhenhai Dongming Craftwork Co, Ltd
I-Ningbo Zhenhai Dongming Craftwork Co, Ltd, iklanyelwe ekwenziweni kwe-pu (polyurethane) ibhola lokucindezela, amathoyizi we-PU squishy afana namathoyizi we-squishy foam, ama-squishy ama-squishes amancane akhuphukayo, amathoyizi we-squishies okucindezela, amathiphu omhlobiso we-jumbo. abanolwazi oluningi ekukhiqizeni igwebu le-PU, njengamanje lo fektri ungumnikazi wemishini esezingeni eliphakeme nemigqa yokukhiqiza, ukwazi ukusiza amakhasimende ukuthuthukisa into enzima ye-pu nokwamukela ama-oda we-OEM.
Amabhola we-Stress noma amathoyizi we-squishy akuzona kuphela izinsizakalo zokusiza abantu ukuba banciphise, bayindlela yokukhangisa nethuluzi lokumaketha lokukhuthaza inkampani yakho noma uhlobo lwakho, noma ngabe imicimbi yebhizinisi, ukwethulwa komkhiqizo, ukuphana nge-giveaway noma umbukiso, iqembu ect.